Nezvedu - Topshine Auto Zvikamu (NanChang) Co., Ltd.
Topshine auto zvikamu fekitori ndeimwe yevanonyanya kugadzira vagadziri vemota yerabha uye yekumisa zvikamu muChina, iyo yakavambwa muna 2006. Topshine ine anopfuura makumi mashanu epamberi ekugadzira michina uye yekuyedza michina michina. Isu tinopa akasiyana siyana auto rabha zvikamu (Injini Inowedzera,Anofamba-famba Mounts / Shock absorber Makomo, Center Kubereka,Mhepo Hose / Rubber Hose,Kubhururuka) uye auto kuturika zvikamu zvikamu (Kudzora Arm,Bhora Rakabatana,Sunga Tambo Kupera,Rack End,Muchinjikwa Rod / Center Batanidza,Stabilizer Batanidza,Idler Arm,Pitman Arm). Saka iwe unogona kuwana zviri nyore mhando dzemhando yepamusoro dzaunoda pamutengo unonyanya kukwikwidza. Kana iwe ukatenga auto zvikamu pamhepo www.topshineparts.com Unogona kuzorora uine chokwadi chekuti iwe uchagamuchira mhando yepamusoro yepamusoro yezvikamu zvemotokari, uye zvikamu zvese zvatinotengesa zvine gwaro rakakwana. Isu tinonzwisisawo kuti zvakakosha sei kuwana zvikamu zvakanaka kana uchitenga auto zvikamu online. Ndicho chikonzero nei zvese zvinhu zvedu zvine kuzvipira kunyatso kukodzera izvo zvatino vimbisa.
Topshine inomhanya neTS16949 manejimendi sisitimu. Zvigadzirwa zvedu zvinogona kubudiswa maererano mutengi zvinodiwa uye zvinopa akakwana pashure-okutengesa basa. Zvigadzirwa zvinotumirwa kuUnited States, Europe, Middle East, Australia, Japan, Latin America uye nyika dzinopfuura makumi matatu nematunhu. Isu tinotengesa ese marangi emota zvikamu, zvinosanganisira Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, Ford, Volkswagen, Mercedes Benz, BMW, Audi, Chevrolet, Land Rover, nezvimwewo Zvigadzirwa zvedu zvinopa OEM nemimwe misika kumba nekune dzimwe nyika, uye kuwana kuzivikanwa kwepasirese uye kuzivikanwa. Topshine ndiye wako akavimbika mupiki. Kana iwe usingakwanise kuwana ruzivo iwe rwaunoda, ndapota tifonere pa18070095538 Shirley kana email kwatiri kusales@topshineparts.com Isu tinofara kukubatsira iwe kuwana izvo zvikamu zvaunoda uye ngatitange kukushandira iwe.
Vatengi vedu uye vatinoshanda navo
Isu takakomba kwazvo nezvese kurongeka, inova uzivi hwedu hwakagamuchirwa naTopshine. Isu tine vimbiso yehunhu kubva mukugadzirwa kwezvinhu zvakasvibirira kune zvigadzirwa zvakapedzwa. Izvo zvinoshandiswa uye kugadzirwa kweiro yega yega, pamwe nekurongedza, kunyora, kurongedza, mapallet uye kuchengetera zvigadzirwa, uye pakupedzisira zvinhu zvinosvika pamaoko ako. Isu tinoteedzera maitiro ese uye tinopa mishumo, mifananidzo uye mavhidhiyo kune vatengi zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Yedu garandi inovhara zvigadzirwa zvakatumirwa kubva kwatiri kwenguva yemakore maviri. Zvigadzirwa zvedu zvinogona kubudiswa maererano mutengi zvinodiwa uye zvinopa akakwana pashure-okutengesa basa.
• Guarantee / garandi
• Zvigadzirwa zveChigadzirwa
• Chigadzirwa Performance
• Kukurumidza Dhirivhari
Kubvumidzwa Kwemhando yepamusoro
• MaOld Orders Akagamuchirwa